China Antibacterial ncibilika spray indwangu ifektri abakhiqizi | Langyi
Indwangu yokufafaza elwa namagciwane
Ukuncibilika kwesifutho kungumgogodla wokukhiqizwa kwamamaski wokuzivikela nemikhiqizo ehlukahlukene yokuhlunga nemikhiqizo yokuzihlukanisa. Kwakhiwa ngokusatshalaliswa okungahleliwe kwe-polypropylene fiber engu-0.5-10.0 m ene-porosity ephezulu (≥75%). Inokuhlunga okuhle, ukuvikela, ukumunca nokumunca uwoyela. Ukusebenza kokuhlunga kwendwangu yokufafaza okujwayelekile kungafinyelela kuma-35%, nokuthi leyo ndwangu yokuncibilikisa yokufutha ngemuva kokwelapha i-electret ingafinyelela ngaphezu kwama-95%.
I-AntibacMaxTM indwangu yokufafaza i-antibacterial yethula amandla aphezulu we-anti-virus anti-virus ion ion kanye ne-zinc ions ngesisekelo sendwangu yokufafaza yokuncibilikisa, kubulala amabhaktheriya namagciwane abhajwe e-situ, okwenza umsebenzi wokuvikela nokuphepha kwendwangu yokufafaza incibilike.
■ Umphumela omuhle wokuhlunga
Ngemuva kokwelashwa kwe-electret, ukusebenza kahle kokuhlunga kwamagciwane kwakungaphezulu kwama-95%.
Ukusebenza kwe-static yesikhathi eside, kuze kufike eminyakeni engu-3.
■ Ukusebenza kokuvala inzalo
unomphumela omuhle wamagciwane ku-escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pneumococcus, pseudomonas aeruginosa.
Ibuye ibe nomphumela omuhle wokuvimbela ezinye izikhunta namagciwane.
■ Kuphephile, kunempilo futhi ngaphandle kokucasuka
izithako ezisebenza ngama-antibacterial
I-Silver ion, iZinc ion
Indawo emhlophe, ebushelelezi, engenamabala, engenayo imigodi
I-BFE (Staphylococcus aureus)
Izinga lokulwa namagciwane le-E.coli ≥99%
Langaphambilini I-masterbatch eshaywa yi-Antibacterial melt-blown
Olandelayo: Indwangu yama-antibacterial nonwoven
Antibacterial Melt Spray Indwangu
Umenzeli wePolymeric Antihydrolysis, Intambo elwa namagciwane, Elwa namagciwane Electret Masterbatch, Antibacterial Indwangu Nonwoven, I-Masterbatch Yokuqothula Elwa Namagciwane, I-Masterbatch elwa namagciwane,